TikTok အပေါ်အပြစ်ကင်းမှုစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဧပြီလ 4, 2021 ဧပြီလ 2, 2021 Alisia Watson ဘ‌‌လော့ခ်, အသားပေးသတင်းများ
၂၄ နာရီအတွင်းလူပေါင်း ၁.၃ သန်းခန့်သည်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူပြီးရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပျော်စရာကောင်းသည်နှင့်အမျှဤလမ်းကြောင်းသည်မကြာမီတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
TikTok သည်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်လက်ချောင်းများကိုကိုင်။ စိန်ခေါ်မှုကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
TikTok သည်သွားလာရင်းဖျော်ဖြေမှုဖြစ်လာသည် မကြာသေးမီကအတိတ်ကာလကလူတို့အဘို့။ လူများသည်စည်းချက်သံနှင့်အတူကခုန်ခြင်းနှင့်၎င်းနှင့်အတူနှုတ်ခမ်းစည်းညှိခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခြင်းမတိုင်မီကလူကြိုက်များခဲ့သော်လည်းကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း TikTok တွင်စိန်ခေါ်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှပျော်စရာအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်မှာမကြာမီတွင်ဗိုင်းရပ်စ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ယခုအချိန်အထိ TikTok မှလူများသည်ပျော်စရာအတွက်စိန်ခေါ်မှုများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ဒီအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စမ်းသပ်မှုမှာ၊ သင်လုပ်ခဲ့တာ (သို့) မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းဖော်ပြချက် ၁၀၀ ကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဗိုင်းရပ်စ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ ဆန်သန့်စင်မှုစမ်းသပ်မှု။ ၎င်းတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း ၁၀၀ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးအပြစ်ကင်းစင်ခြင်းဟုခေါ်သောဤစိန်ခေါ်မှုအသစ်ကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာဆန်သန့်ရှင်းရေးစမ်းသပ်မှုလိုမေးခွန်းများစွာလည်းရှိပြီးသင်၏အလေ့အကျင့်များကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သင်၏အပြစ်ကင်းစင်မှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤအလေ့အထများသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ လိင်စသည်တို့နှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ် ဦး ဖြစ်သော Grace Wetsel နှင့် Ella Menashe တို့ကဖန်တီးခဲ့သည်။ ဆန်စပါးသန့်ရှင်းရေး၏စိတ်ကူးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသော်လည်းခေတ်မမီတော့သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းသတိပြု မိ၍ ခေတ်သစ် Gen Z.
ဒီအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စမ်းသပ်မှုမှာ၊ သင်လုပ်ခဲ့တာ (သို့) မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းဖော်ပြချက် ၁၀၀ ကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည်သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသာအမှတ်ခြစ်ရန်လိုပြီးအခြားထုတ်ပြန်ချက်များကိုသူတို့မလုပ်ရသေးသောအရာအဖြစ်ယူမှတ်ကြလိမ့်မည်။
ဆန်သန့်စင်မှုစမ်းသပ်မှုပုံစံတွင်စမ်းသပ်မှုရှိသော်လည်းလက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အချို့သောအရာများပြောင်းလဲသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း”၊ “ စာသင်ဆောင်ဝတ်လစ်စလစ်၊ “ အတုအယောင်ရှိခြင်း၊ ”“ Corona” စသည်ဖြင့်ဖော်ပြချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
သင်ပြုပြီးသောထုတ်ပြန်ချက်များအားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုပြီးစစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ရလဒ်ကိုရမှတ်အဖြစ် ၁၀၀ တွင်တွက်ချက်သည်။ ရလဒ်သည်သင်မည်သည့်အပြစ်မဲ့မှုအမျိုးအစားကိုလဲကျကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤအမျိုးအစားများတွင် 'Rebe', 'heathen' တို့ပါဝင်သည်။ , 'baddie', 'ကောင်းကင်တမန်' စသည်တို့ကို
သို့သော် TikTok ၌ဤစိန်ခေါ်မှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၊ ၎င်းသည်မတူညီသောဇာတ်ညွှန်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ TikTok သည်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်လက်ချောင်းများကိုကိုင်။ စိန်ခေါ်မှုကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်ခြစ်ကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ပြီး အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်ထိုအရာကိုပြုလုပ်ပါကလက်ချောင်းတစ်ချောင်းချရမည်။ သင်၏လက်ချောင်းအများစုသည်ပြတ်နေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါကအပြစ်ကင်းစင်မှုကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရပ်နေသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဂိမ်းကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်မိမိတို့၏မေးခွန်းများကိုဖြည့်စွက်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည် TikTok အားမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ဤရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတွင်ပျင်းစရာမဖြစ်စေရန် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အများပိုင်သတင်း Going ဗိုင်းရပ်စ် လူမှုမီဒီယာ TikTok
Alisia Watson သည်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမာစတာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီးယခုတွင် Brand Strategist အဖြစ်လုပ်ကိုင်သည် မင်္ဂလာပါ နှင့် Sky News ကိုဖွင့်.
Certiorari ၏စာဖြင့် SCOTUS အယူခံပြန်လည်သုံးသပ်ကြေငြာချက်၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအသုံးပြုသောစွမ်းအား